❤️ Comment Augmenter le Nombre de Followers sur Instagram de Manière Organique : Instagram News Automation - Winches Club
Instagram News Automation : Instagram News Automation
Instagram waxay si dhakhso ah u noqotay xarun bulsho oo awood u leh ganacsiyada. Sababo cad dartood : 13% de la population mondiale l’utilise, et 80% d’entre eux suivent des entreprises.
Avec un taux de 4,21 % de likes, share iyo comments, Oberlo waxa uu sheegay in ka qaybgalka macaamiishu aanay waligeed xoog noqon. Toban jeer ayay ka caansan tahay Facebook-ga, Pinterest iyo Twitter wadajir ah.
Sidaa darteed, Shirkadaha hore-u-fikirka ayaa raadinaya habab cusub oo ay kaga qaybgalaan taageerayaashooda Instagram-ka, inkastoo ay jiraan dhibaatooyin. Si lagaaga caawiyo inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato dadaallada suuqgeynta ee lacagta leh iyo adoo ilaalinaya tabaha suuqgeynta Instagram-ka muddada fog, nous avons établi cette liste utile de 23 recommandations. Waa waqtigii la bilaabi lahaa xafladaha.
Instagram News Automation. Cusbooneysii si joogto ah.
Calaamaduhu waa inay firfircoonaadaan haddii ay rabaan inay helaan taageerayaal cusub oo ay kordhiyaan ka-qaybgalka, laakiin sida ay tahay inay u firfircoonaadaan ? Daraasaduhu waxay muujinayaan in hal ama laba qoraal maalintii ay ku habboon yihiin.
Instagram News Automation. Halkii wax wacdiyi lahayd, la wadaag sheekooyin.
Xayeysiiska ganacsiga ee Instagram ayaa dayacay doorkii Instagram sida”qalab waxyoon graphic”, waa kuma waxa loogu talagalay. Halkii aad kaliya ku wacdin lahayd fariinta iibka iibsadayaashaada, isticmaal sawiro, muuqaalo iyo qoraal si loo soo jiito.
Instagram News Automation. Samee magac caan ah oo caan ah.
Meheradaha isku dayaya inay horumariyaan astaanta Instagram-ka waa inay diiradda saaraan saddex shay oo muhiim ah : hufnaan, kala soocidda iyo joogtaynta. Hab degdeg ah oo aan qorshaysnayn ma keenayso natiijada la rabo.
4. Ku ilaali bilicsanaanta joogtada ah ee dhammaan quudintaada Instagram.
Instragram waa shabakad bulsheed oo aad caan u ah wadaagga sawirada iyo muqaalada sababtoo ah muhiimada ay siiso bilicda.. Inkastoo xaqiiqda ah in iftiinka dhalaalaya uusan hadda ku jirin moodada, Waxyaabo muuqaal ah oo ku jira Instagram-ka waligeed ma lumin doono muhiimaddeeda.
5. Go'aanso hashtagyada ku habboon in la isticmaalo.
Hashtag-yada aad ku isticmaasho Instagram-ka waxay samayn karaan faraqa u dhexeeya boostada waxqabadka sare leh iyo boostada ku dhammaata xagga hoose ee liiskaaga soo socda..
6. Diirada saar walxaha uu isticmaaluhu soo saaray.
Macluumaadka isticmaale-soo-saare ee Instagram-ka ayaa ah habka quduuska ah ee suuq-geynta. Waxa ku jira waxa abuuray oo ansixiyay suuqa aad beegsanayso ka hor inta aanu si toos ah u socon, kaas oo gacan ka geysta dhimista kharashaadka suuqgeynta iyadoo la kordhinayo ka qaybgalka macaamiisha.
7. Sahami qaabab kala duwan oo muuqaal ah oo laga heli karo Instagram si aad u go'aamiso waxa ugu fiican ee sumaddaada u shaqeeya.
Qiimaha muuqaalku aad ayuu uga badan yahay kan sawirka.
8. Adeegso qoraal-ku-xiran iyo qalab qoraal-qorid oo xidhan Instagram-ka.
Sida laga soo xigtay Instagram, 60 % des stories sont écoutées, tandis que 40 % sont regardées en silence.
9. Reels Instagram-ka ayaa gadaal ka gadan doona haddii aad ogolaato.
Waa muhiim in la fahmo qaababka badan ee xayeysiiska ee goobta, car 75 % des Instagrammers déclarent prendre des mesures “oo ay ku jiraan goobaha booqashada, Google ama u sheeg saaxiib wax ku saabsan” ka dib markii ay saameyn ku yeelatay boostada.
10. Isticmaal filtarrada dhabta ah ee Instagram ee la kordhiyay si aad faa'iidadaada u yeelato.
Instgram's Spark AR Studio wuxuu u fududeeyaa qof kasta inuu abuuro filtarrada Xaqiiqda La Kordhiyey. Iyada oo in ka badan bilyan oo aragtiyo laga helay qaar ka mid ah filtarrada ugu waaweyn ee Instagram tan iyo markaas, Xaqiiqda la kordhiyey ayaa si gaar ah gacanta sare ugu yeelatay madasha.
11. Isticmaal noocyada xayeysiiska fiidyaha ee Instagram.
12. Gif-yada Animated waxay noqon karaan madadaalo haddii gadaal laga tago.
GIF waa qalab weyn oo loogu talagalay kooxaha suuq-geynta, car des études indiquent que les consommateurs sont plus enclins à regarder des vidéos de 15 secondes jusqu’au bout..
13. Kordhi taraafikada degelkaaga adiga oo ka faa'iidaysanaya saldhigga isticmaale ee Instagram.
Maadaama Instagram ay ogolaato hal xiriiriye oo la gujin karo bio-gaaga, waxay kaa caawin kartaa kordhinta taraafikada mareegahaaga.
14 Vous pouvez “inuu guulaysto” Instagram-ka iyadoo la adeegsanayo hagaajinta mashiinka raadinta (Seo).
Instagram iyo SEO ma u ekaan karaan shuraako dabiici ah jaleecada hore, laakiin shabakada maanta aad u daran, waa lagama maarmaan in koontadaada Instagram ay leedahay qorshe SEO ah oo meesha ku jira.
15. Isticmaal saameyn yar yar si aad u wanaajiso sumcadda ganacsigaaga
Iyada oo loo marayo suuq-geynta saamaynta Instagram, waxa aad u sii badanaysa in la isticmaalo hogaamiyayaasha fikirka ee warshadaha si loo gaadho dhagaystayaal balaadhan oo wata fariimo ganacsi.
16. Abaalmarin sii qofka qaada sawirka Instagram-ka ugu hal-abuurka badan.
Tartamada waa hab fiican oo lagu kordhiyo ka qayb qaadashada Instagram kaaga soo socda.
17. Instragram waxa loo isticmaali karaa sidii qalab suuqgeyn si loo kordhiyo tirada dadka iska diiwaan galiyay liiska iimaylka.
Marka ay timaado in la dhiso xiriir mustaqbalka fog macaamiisha, iimaylka ayaa weli ah habka la doorbido ee isgaarsiinta. Isticmaalka aaladda Instagram waxay kaa caawin kartaa inaad hesho taageerayaal badan oo Instagram ah (codsi).
18. Isticmaal Sheekooyinka Instagram.
Avec 500 millions d’utilisateurs quotidiens, Sheekooyinka Instagram waxay si dhakhso ah u kordheen heerka ugu sarreeya ee caanka ah ee madal. Sheekooyinka Instagram waxay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah ay u maleynayaan inay ugu dambeyntii qaadan karto booska quudinta ugu weyn.
19. Ku dar isku xirka Sheekooyinkaaga Instagram profile kaaga.
Hore, Kaliya adeegsadayaasha Instagram ee la xaqiijiyay ayaa ku dari kara isku xirka ” Wax badan ka arag ” sheekadooda, laakiin hadda, toute personne possédant un compte professionnel et au moins 10 000 followers peut le faire.
20. Si wanaagsan uga faa'iidayso shucuurtooda.
Emojis, gaar ahaan, ka faa'iidayso isgaadhsiinta qoraalka ah marka lagu isticmaalo Instagram. Waaga uu emoticons batay (iyo kuwo kale oo soo socda), waa muhiim inaad haysato qorshe aad ku isticmaaleyso oo ka tarjumaya dabeecada ganacsigaaga adigoon u muuqan mid caadi ah.
21. Ku xayeysiiso akoonkaaga Instagram-ka aaladaha kale ee warbaahinta bulshada.
Kor u qaad kanaalkaaga Instagram dad badan intii suurtogal ah. Waad ku guuleysan kartaa, tusaale ahaan, oo ay ku jiraan isku xirka boggaaga Instagram ee cusboonaysiinta heerka Facebook.
22. Dukumeentiga oo dhan, isticmaal wicitaanada ficil (Ctas).
Si fiican uga faa'iidayso xayeysiiskaaga Instagram, xataa haddii aad loo mahadiyo. Ku dar wicitaan cad oo ficil ah Instagram.
23. U fiirso qoraalladaada caanka ah ee Instagram oo qor sida aad u horumarin karto.
Baro “formula” si aad u kordhiso tirada taageerayaasha Instagram-ka oo aad ugu dabaqdo istaraatiijiyadaada xayeysiinta si aad u hesho taageerayaal badan.
Maqaal horeSida loo soo dejiyo fiidiyowyada Instagram-ka iPhone-kaaga : 3 Hababka iyo Codsiyada
Maqaalka XigaInstagram News Automation